Ny lalao board 74 tsara indrindra amin'ny tantara | Omeo fialam-boly aho
Azo antoka fa tianao ny mizara traikefa amin'ny fianakavianao, amin'ny namanao na amin'ny namanao. Ary inona no fandrisihana tsara kokoa ho an'ny fivoriana, ho an'ireo andro orana na mangatsiaka, na ho an'ny fety, noho ny manana ny lalao board tsara indrindra hatramin'izay. Misy izy ireo ho an'ny tsiro sy taona rehetra, amin'ny karazana sokajy sy lohahevitra samihafa. Mankaleo? Tsy azo atao! Hanana fotoana mahafinaritra ianao amin'ireo lohateny arosoy eto.
Ho fanampin'izay, avelanay ho anao ny fitambaran'ny lalao board izay navoakanay mba hahafahanao misafidy izay mifanaraka amin'ny zavatra tadiavinao:
Lalao board tsara indrindra ho an'ny fianakaviana
Lalao board tsara indrindra ho an'ny ankizy
Lalao solaitrabe tsara indrindra
Lalao board escape room tsara indrindra
1 Karazana lalao board
1.1 Mpilalao mpilalao
1.1.1 Solitaire miaraka amin'ny karatra
1.1.3 Tsy raha tsy misy ny sakako
1.2.2 Ilay nosy voarara
1.2.6 Tranon'ny hadalana
1.2.8 Zombicide sy Zombie Kidz Evolution
1.2.10 Ny angano Andor
1.3 Lalao Board ho an'ny olon-dehibe
1.4 Ho an'ny olona roa na mpivady
1.4.3 Bang! Ny duel
1.4.4 Kaody tsiambaratelo Duo
1.4.6 Fahagagana Duel
1.5 Lalao birao ho an'ny ankizy
1.6 Lalao Board ho an'ny fianakaviana
1.7 Lalao karatra
1.7.1 Fifanarahana ampihimamba
1.7.2 Lalao Tricky Moth
1.7.3 Dobble tsy tantera-drano
1.8.1 lakroa hoy ianao
1.8.4 Lalao Strick
1.9 BIRAO, BIRAO
1.9.5 Ny lalan'ny harena
1.9.6 Amin'ny fitadiavana ny empire cobra
1.9.7 Birao banga
1.10.2 ambin 'ny daomy
1.10.3 Lalao Checkers
1.10.4 Parcheesi sy Lalao ny gisa
1.10.7 Lalao tafangona
1.11.1 Lalao Dragon Ball
1.11.2 Lalao Doom The Board aterineto
1.11.3 Lalao Game of Thrones aterineto
1.11.4 Ny Simpsons
1.11.5 Ny Walking Dead Trivia
1.11.6 Ny Indiana Jones Tower
1.11.9 chef chef
1.11.11 Ny trano taratasy
1.11.12 Famirapiratana mahagaga
1.11.14 Ilay mitsivalana
1.11.15 Harry Potter tsy misy dikany
1.11.16 Tompon'ny peratra tsy misy dikany
1.11.17 Legiona Star Wars
1.12 Lalao kilalao paikady
1.12.1 ERA Moyen Âge
1.12.5 Loza mahazatra
1.12.9 Fahatsiarovana 44
1.12.10 Imhotep: Ilay Mpanorina an'i Ejipta
1.12.11 Tanàna mahazatra
1.13 An-tserasera ary maimaim-poana
1.13.1 Tranonkala lalao maimaim-poana
1.13.2 Apps ho an'ny fitaovana finday
2.1 Lalao Escape Room an-tserasera
2.2 Lalao milalao anjara
3 Ahoana ny fisafidianana ny lalao board tsara indrindra
Karazana lalao board
Ireo no sokajy manana lalao board tsara indrindra teo amin'ny tantara, mizarazara araka ny sokajy sy ny lohahevitra. Miaraka amin'izy ireo dia tsy misy fialan-tsiny tsy hanana fotoana mahafinaritra be dia be:
ireo Irery sady leo, tsy afaka manana lalao roa foana ianao, na tsy vonona ny hilalao foana izy ireo, noho izany dia tsara ny mahazo ny iray amin'ireto lalao mpilalao tokana ireto:
Solitaire miaraka amin'ny karatra
Deck amin'ny karatra, milalao karatra, ...
Ny deck dia tsy mamela anao hilalao ao anaty vondrona fotsiny, fa afaka mamorona ihany koa ny tenanao irery Amin'ny fomba Windows madio indrindra, fa eo amin'ny latabatrao, ary miaraka amin'ny tokotaninao tianao, frantsay na espaniola. Lalao hanelingelina anao sy hameno ny ora tsy miasa.
Mividiana karatra espaniola Mividy karatra frantsay
Mpilalao iray ihany no ilain'ny Zoma, ary lalao karatra izany. Aventure solo izay ahafahanao mandresy ny lalao ihany. Ity lalao ity dia mandentika anao amin'ny tantara momba an'i Robinson, izay vaky sambo tao amin'ny nosy misy anao ary tsy maintsy manampy anao hiady amin'ny loza sy piraty marobe.
Vidio ny zoma
Tsy raha tsy misy ny sakako
Lalao Cocktail Saka, ...
Ity lalao hafa ity dia natao ho an'ny mpilalao tokana ihany koa, na dia afaka milalao hatramin'ny 4 aza izy ireo. Tsotra izany, lalaovina amin'ny karatra. Ny tanjona dia ny hitari-dalana ny saka mba ho any amin'ny toerana mafana tsara hivoaka ny arabe. Na izany aza, tsy ho mora ny fiampitana ny labiera an-tanàn-dehibe ...
Buy Aza tsy misy ny saka
Izy io dia lalao karatra tena tsotra, na dia ho an'ny ankizy aza. Afaka milalao avy amin'ny mpilalao 1 ka hatramin'ny 4 ihany izy ireo. Ary tsy maintsy ho azonao antoka fa tsy afa-miala amin'izany ny jiolahy manandrana mandositra. Ny taratasy dia hanakana ny lalana hisambotra azy. Hifarana ny lalao rehefa mikatona avokoa ny fivoahana rehetra.
Lalao aingam-panahy avy amin'ny tantara mampihoron-koditra mahafinaritra an'ny HP Lovecraft. Anaram-boninahitra manokana ho an'ny olon-dehibe izay milalao irery. Mikasika ny tantarany dia hita fa mpianatra maromaro avy ao amin’ny Oniversiten’i Miskatonic no hita faty. Nanadihady lohahevitra mifandraika amin'ny asan'ny maizina ireo mpianatra ireo ary tsy maintsy tonga amin'ny fototry ny zava-misy amin'ity lalao karatra ity ianao.
Vidio ny Arkham Noir
Raha izay no tianao manentana ny fanahin'ny ekipa, Ankoatra ny fampivelarana fahaiza-manao fiaraha-miasa, inona no tsara kokoa noho ireto lalao board cooperative ireto:
Lalao fiaraha-miasa mety amin'ny sokajin-taona rehetra, manomboka amin'ny 8 taona. Ao anatin'izany dia tsy maintsy mamaha zava-miafina ianao, ary ny mpilalao rehetra dia handresy na ho very miaraka. Ny tanjona dia ny hahitana ny marina momba ny fahafatesan'ny fanahy iray izay mandehandeha ao amin'ny trano mihantona. Amin’izay vao afaka mandry am-piadanana ny fanahinao.
Vidio ny Mysterium
Ilay nosy voarara
Devir-Ilay Nosy Voarara ...
Tsy maintsy miara-miasa ny tsirairay mba hamerenana zavatra sarobidy avy amin'ny nosy mistery. Tsy ho mora anefa izany, satria milentika tsikelikely ny Nosy. Raiso ny kiraron'ny mpitsangatsangana 4 saro-pady ary angony ireo harena masina alohan'ny hiafarany any ambanin'ny rano.
Vidio ny Nosy Voarara
Mercury - Lalao ...
Lalao fiaraha-miasa tsara indrindra ho an'ny vondrona ary mety ho an'ny fianakaviana iray manontolo. Afaka milalao amin'ny mpilalao 2 ka hatramin'ny 12 izy ireo. Misy karatra 176 izay hanampy anao hahazo ny isan-jaton'ny volamena ambony indrindra ao amin'ny toeram-pitrandrahana. Ny iray amin'ireo mpilalao dia ny saboteur, fa ny ambiny kosa tsy mahalala hoe iza izy. Ny tanjona dia ny hahazo ny volamena eo anoloany mba handresy.
Mifototra amin'ny tantaran'i Arkham Noir iray ihany izy io, ary toerana iray ihany. Fa ity dia andiany faha-3 feno votoaty vaovao, mistery vaovao, hadalana sy fandringanana bebe kokoa, ary zavaboary ratsy kokoa izay hanandrana hamoha ny ratsy matory. Ny mpilalao dia ho mpanadihady izay hiezaka ny hisoroka ity loza mitatao eran'izao tontolo izao miaraka amin'ny fanampian'ny mpilalao hafa sy ny famantarana omena.
Lalao HABA 302387 ...
Lalao fiaraha-miasa natao ho an'ny ankizy, manomboka amin'ny efatra taona, na dia afaka mandray anjara ihany koa ny olon-dehibe. Ny tanjon'ny andian-jiolahy Haba Hamster dia ny hanampy amin'ny fanangonana ny sakafo ilaina amin'ny ririnina. Eo amin'ny solaitrabe misy tsipiriany rehetra, toetra manokana (kodiarana, sarety, ascenseur finday ...), sns.
Vidio ny Hasterbande
Lohateny fiaraha-miasa iray hafa izay mandentika anao any amin'ireo lalantsara sy trano fonenan'i Arkham. Misy tsiambaratelo sy biby goavam-be mampatahotra miafina. Misy adala sy cultistes sasany mikononkonona ao anatin'ireny tranobe ireny mba hiantsoana ny Ntaolo. Ny mpilalao dia tsy maintsy mandresy ny sakana rehetra ary mamaha ny mistery. Ho afaka?
Vidio ny The Mansion of Madness
Z-man Games Espaina ...
Anaram-boninahitra mety amin'ny fotoana. Lalao board mampiala voly izay ahitana mpikambana ao amin'ny ekipa manokana miady amin'ny aretina tsy maintsy miatrika areti-mandringana 4 mahafaty izay miparitaka eran'izao tontolo izao. Miezaha hahazo ny loharanon-karena ilaina rehetra mba synthesize ny fanasitranana sy hamonjy ny olombelona. Ny miaraka ihany no afaka...
Zombicide sy Zombie Kidz Evolution
Tonga ny apokalipsy zombie. Noho izany dia tsy maintsy miara-miasa amin'ny ekipa ianao mba hiadiana amin'ny tenanao ary handringana ny tsy maty rehetra. Ny mpilalao tsirairay dia mandray ny andraikitry ny olona tafavoaka velona izay nomena fahaiza-manao manokana, ka samy hanana ny anjara asany avy. Toy izany no hiadianao amin'ireo andian'olona voan'ny aretina. Fanampin'izay dia manana version Kidz ho an'ny ankizy madinika.
Vidio ny Zombicide Vidio ny Kidz version
Mysterium Park dia iray amin'ireo lalao birao fiaraha-miasa tsara indrindra izay ahafahanao miroboka amin'ny tsena mahazatra, saingy manafina tsiambaratelo maizina. Nanjavona ny tale teo aloha, ary tsy nisy farany ny fanadihadiana. Nanomboka tamin'io andro io dia tsy nitsahatra ny zava-mahagaga ary ny sasany dia resy lahatra fa mirenireny any ny fanahiny ... Ny tanjonao dia ny hanadihady sy hahitana ny marina ary manana 6 alina fotsiny ianao alohan'ny hivoahan'ny foara.
Vidio ny Mysterium Park
Ny angano Andor
Mpandresy loka, ity dia iray amin'ireo anaram-boninahitra kaoperativa tsara indrindra azonao vidiana. Lalao noforonin'ilay mpanao sary malaza Michael Menzel ary mitondra anao any amin'ny fanjakan'i Andor. Mizotra mankany amin'ny lapan'ny Mpanjaka Brandur ny fahavalon'ity faritany ity. Ireo mpilalao dia miditra amin'ny kiraron'ireo mahery fo izay tsy maintsy miatrika azy hiaro ny lapa. Ary… tandremo ny dragona.
Vidio ny The Legends of Andor
Lalao Board ho an'ny olon-dehibe
Ho an'ny zatovo, ho an'ny lanonan'ny namana, handany ny fotoana mahafinaritra indrindra miaraka amin'ireo olona tianao. Izany no anton'ity fifantenana ny lohatenin'ny lalao ho an'ny olon-dehibe tsara indrindra ity.
Jereo ny lalao board tsara indrindra ho an'ny olon-dehibe
Ho an'ny olona roa na mpivady
Rehefa ahena ho roa monja ny isan'ny mpilalao dia tsy voafetra ny fahafaha-manao. misy ny lalao miavaka ho an'ny mpilalao tsiroaroa. Ny sasany amin'ireo tsara indrindra dia:
Ity dia lalao board izay mila fampidirana vitsivitsy. Manana takelaka mitsangana ianao ary misy slot eo amin'ny tapany ambony mba hanipy ireo tapa-kazo. Ny singa tsirairay dia manana ny endriky ny lalao video retro malaza, ary tsy maintsy mifanaraka amin'ny fomba tsara indrindra ianao isaky ny fihodinana.
Vidio ny Tetris
Iray amin'ireo lalao board abstract mivarotra tsara indrindra eran'izao tontolo izao. Noforonina tamin'ny 1987 izy io, ary mbola velona mandraka androany nohavaozina tanteraka. Manana takelaka hexagonal sy marbra vitsivitsy ianao. Ny tanjona dia ny hanipy eny amin'ny solaitrabe ireo marbra 6 an'ny mpanohitra (amin'ireo 14 napetrany).
Bang! Ny duel
Raha tianao ny tandrefana, dia ho tianao ity lalao karatra ity izay mitondra anao any amin'ny andrefana lavitra sy bibidia izay hiatrehanao ny mpifanandrina aminao amin'ny duel. Ireo mpandika lalàna manohitra ny solontenan'ny lalàna, iray ihany no afaka mijanona, ny iray hanaikitra ny vovoka ...
Kaody tsiambaratelo Duo
Devir- Kaody tsiambaratelo ...
Izy io dia kilalao firaisana tsikombakomba sy mistery natao ho an'ny fianakaviana iray manontolo, milalao tsiroaroa. Tsy maintsy ho haingana sy hendry ianao, satria ho mpitsikilo izay tsy maintsy hamaha ny zava-miafina amin'ny fandikana famantarana an-kolaka. Mety ho herring mena ny sasany, ary raha tsy azonao atao ny manavaka azy ireo dia ho ratsy ny vokany ...
Vidio Kaody tsiambaratelo Duo
SD GAMES- Fitakiana, loko ...
Efa maty ny mpanjaka, nefa tsy misy mahalala ny nitrangan’izany. Niseho nivalampatra tao anaty barika divay izy. Tsy namela mpandova fantatra izy. Izany no scenario nanombohan'ny lalao, izay misy dingana roa: ny voalohany dia samy hampiasa ny karatry ny mpilalao tsirairay haka mpanaraka, amin'ny faharoa dia hiady ny mpanaraka mba hahazoana ny maro an'isa. Izay mahazo vato be indrindra amin'ny ankolafy misy azy no mandresy.
Asmodee-7 mahagaga: ...
Mitovy endrika amin'ny 7 Wonders nahazo loka, saingy natao ho an'ny mpilalao 2. Amboary ary reseo ny mpifaninana aminao mba hampaharitra ny sivilizasionanao. Ny mpilalao tsirairay dia mitarika sivilizasiona, manorina trano (ny karatra tsirairay dia maneho trano iray) ary hanampy amin'ny fanamafisana ny tafika, hahita fandrosoana ara-teknika, hampivoatra ny fanjakanao, sns. Afaka mandresy ianao amin'ny alàlan'ny fahefana ara-miaramila, siantifika ary sivily.
Mividiana 7 Wonders Duel
Lalao birao ho an'ny ankizy
Raha manana ianao ny kely ao an-trano, iray amin'ireo fanomezana tsara indrindra azonao omena azy ireo ny iray amin'ireo lalao ireo. Fomba iray ahafahan'izy ireo mivoatra araka ny tokony ho izy, mianatra ary manalavitra ny efijery mandritra ny fotoana fohy ...
Jereo ny lalao board tsara indrindra ho an'ny ankizy
Lalao Board ho an'ny fianakaviana
Anisan'ireo tsara indrindra azonao vidiana ireo, satria afaka mandray anjara ny rehetra, namana, zanakao, zafikelinao, raibe sy renibe, ray aman-dreny ... Natao manokana ho an'ny vondrona lehibe sy mahafinaritra.
Jereo ny lalao fianakaviana tsara indrindra
Ho an'ireo mpankafy ny lalao karatraIreto misy vitsivitsy izay mbola tsy nampidirina tao amin'ny fizarana teo aloha, ary mifototra amin'ny decks:
Io no lalao Monopoly mahazatra, saingy nilalao tamin'ny karatra. Lalao haingana sy mahafinaritra izay mampiasa karatra hetsika hanangonana hofan-trano, hanaovana raharaham-barotra, hahazoana fananana, sns.
Vidio ny fifanarahana monopole
Lalao Tricky Moth
Devir - lalao samoina ...
Ny lalao karatra misy ny fizarana amin'ny mpilalao ary ny voalohany lany amin'izy ireo no mandresy. Mba hanaovana izany, dia tsy maintsy mametraka karatra isaky ny fihodinana izy ireo miaraka amin'ny isa ambony kokoa na ambany kokoa noho ilay eo ambony latabatra. Ary ny tsara indrindra, mba hahazoana fandresena dia tsy maintsy misoloky ...
Vidio Tricky Moth
Dobble tsy tantera-drano
Lalao hafainganam-pandeha, fandinihana ary reflexes, miaraka amin'ny karatra tantera-drano am-polony mba hahafahanao milalao ao anaty dobo amin'ny fahavaratra. Ny karatra tsirairay dia miavaka, ary tsy misy afa-tsy sary iray mitovy amin'ny hafa. Tadiavo ireo marika mitovy, teneno mafy ary alaivo na asio ilay karatra. Afaka milalao hatramin'ny minigames 5 samihafa ianao.
Raha mahazatra ny lalao board na karatra, dia toy izany koa ny lalao dice. Ireto ny sasany amin'ireo lalao dice nalaza indrindra:
lakroa hoy ianao
Manana dice 14, goblet 1, hourglass 1 ianao, ary izay ihany. Lalao mifototra amin'ny fihodinana hanatsarana ny fahatakarana ny fihainoana, ny fandeferana, ny fahaiza-misaina. Mila manodina ny daolo fotsiny ianao ary mamorona teny mifamatotra be indrindra ao anatin'ny fotoana anananao. Soraty ny hevitrao ary handresy ny mpifanandrina aminao.
Vidio Cross Dices
Kaopy sy dice ihany no ilainao hifaninanana sy hilalaovana. Lalao tsotra io, azo lalaovina araka izay tianao, fa azonao ampiasaina fotsiny hanodinana ny daoly sy hijerena hoe iza no manodina ny isa lehibe indrindra, na manandrana mifanandrify amin'ireo fitambarana mety hivoaka.
Tsy kilalaon-daozy nentim-paharazana izany, fa manana dice 9 misy endrika mety ho toetra, toerana, zavatra, fihetseham-po, sns. Ny hevitra dia ny hanodina ny daoty, ary miankina amin'ny zavatra novolavolainao, mitantara tantara miaraka amin'ireo akora ireo.
Mividiana Story Cubes
Ravensburger - fitokonana...
Lalao ho an'ny fianakaviana manontolo na ho an'ny namana. Ady majika amin'ny alalan'ny fanodinkodinana daoty eny amin'ny kianja mba hahitana fitambarana marika mifanandrify amin'ny fanaovana ody sy ody. Rehefa mandroso ny lalao dia ho very dice ny mpilalao ary handany ny heriny. Izay resy aloha no resy.
Mora ny mianatra, mampivelatra ny fahaizanao ara-tsaina, ary haingana ny lalao, satria tsy maninona ny anjara, mandray anjara ny rehetra. Mba hahazoana isa dia tsy maintsy manisy isa betsaka araka izay azo atao ianao.
Vidio ny QWIXX
Ny vondrona hafa amin'ny lalao board tena ilaina dia lalao board. Ny boards dia tsy ny fototry ny lalao ihany, fa afaka manome anao scenario lalao manentana kokoa. Ny boards sasany dia fisaka, fa ny hafa kosa telo dimensions ary vita tsara.
Scrabble dia iray amin'ireo lalao mahazatra sy mahafinaritra indrindra hanaovana teny. Tsy maintsy manoratra sy mampifandray litera ianao mba hamoronana ireo teny miaraka amin'ireo karatra 7 nalaina kisendrasendra. Ny litera tsirairay dia manana sanda, ka ny isa dia kajy mifototra amin'ireo soatoavina ireo.
Lalao Plan B PBG40020 ...
Ity lalao board ity dia hahatonga anao hamoaka ny fanahinao mpanao asa tanana, hamorona taila mosaika mahafinaritra miaraka amin'ny tailany. Ny tanjona dia ny hahazoana ny haingo tsara indrindra ho an'ny fanjakan'i Evora. Ao anatin'izany dia mpilalao 2 ka hatramin'ny 4 no afaka milalao, ary mety amin'ny 8 taona no ho miakatra.
Tactic Touché Ankizy sy ...
Lalao board taktika ho an'ny fianakaviana iray manontolo. Fandikana indray ny lalao karatra miaraka amin'ny tokotanin-tsambo espaniola nivadika ho birao. Sahinao ve ny manome azy io?
Lalao Cefa- Dracula ...
Classic tamin'ny taona 80 izay miverina indray. Lalao aingam-panahy avy amin'ny alan'i Transylvania, any amin'ny distrikan'ny lapan'i Dracula. Mifandona ny herin'ny ratsy sy ny herin'ny tsara satria izy ireo no voalohany niditra tao amin'ny rova. Iza no hahazo izany?
Ny lalan'ny harena
Cefa Toys- Lalao board, ...
Ny tena nostalgique dia tsy maintsy hahatsiaro ity lalao mbola amidy ity. Lalao mahafinaritra ho an'ny fianakaviana iray manontolo izay ny tanjona dia ny hividy sy hivarotra fananana manamorona ny Ranomasina Mediterane nandritra ny taonjato faha-XNUMX sy faha-XNUMX. Mitantana tsara ny harenanao rehefa mitsoraka amin'ity piraty ity ianao.
Vidio ny Lalana Treasure
Amin'ny fitadiavana ny empire cobra
Lalao fitsangatsanganana ho an'ny fianakaviana manontolo eo anelanelan'ny mahafinaritra sy ny mahagaga. Iray amin'ireo anaram-boninahitra izay efa nilalao tamin'ny taona 80 ary maro ny ankizy tamin'izany fotoana izany no afaka mampianatra ny zanany.
Vidio amin'ny fitadiavana ny Fanjakana Cobra
MAMORONA ny lalaonao manokana ...
Chips, dice, hourglass, karatra, karatra, kodiarana roulette, ary solaitrabe… Saingy banga daholo! Ny hevitra dia ny mamorona ny lalao board anao manokana. Miaraka amin'ny fitsipika tianao, ny fomba tianao, manao sary eo amin'ny lamba fotsy, mampiasa stickers vita printy, sns.
Vidio ny lalaonao
Tsy afaka nanadino an'io izy ireo lalao board klasika, ireo izay teo anivontsika hatramin'ny taranaka fara mandimby ary tsy lany andro. Ny tsara indrindra dia:
StonKraft Set amin'ny ...
Hazo hazo mirefy 31 × 31 sm, sokitra tanana. Asa kanto izay mety ho singa haingon-trano sy milalao lalao tsara indrindra amin'izay tianao. Ny tapany dia manana fanambanin'ny magnetika mba tsy hianjera mora amin'ny solaitrabe. Ary ny solaitrabe dia azo aforitra sy ovaina ho boaty hihazonana ny taila rehetra.
Cordays - Raharaha...
Mila fampidirana vitsivitsy ny domino. Io no iray amin'ireo lalao tranainy indrindra teo amin'ny tantara. Ary eto ianao dia manana ny iray amin'ireo lalao tsara indrindra, miaraka amin'ny kitapo premium sy ny ampahany vita tanana. Ankoatra izany, tsy iray ihany ny fomba filalaovana, fa misy fomba maro ...
30 × 30 sm hazo hazo birch solid sy 40 tapa-kazo 30 mm savaivony. Ampy ny milalao ny lalao mahazatra ny checkers. Lalao tsotra mety ho an'ny 6 taona mahery.
Parcheesi sy Lalao ny gisa
Cayro - Parchis sy Oca ...
Birao iray, tarehy roa, lalao roa. Amin'ity lahatsoratra ity dia hanana ny zavatra rehetra ilainao ianao amin'ny filalaovana ny lalao mahazatra Parcheesi, ary koa ny lalao gisa raha mihodina ianao. Ahitana birao hazo 26.8 × 26.8 sm, goblets 4, dice 4 ary marika 16.
Mividiana Parcheesi / Goose
Lalao Bingo Falomir- XXL ...
Bingo dia lalao ho an'ny fianakaviana iray manontolo, iray amin'ireo mahazatra amin'ny fotoana rehetra. Miaraka amin'ny amponga mandeha ho azy mba handeha hamoaka ny baolina miaraka amin'ny isa kisendrasendra hiampita amin'ny karatra mandra-pahatonganao milahatra na bingo. Ary mba hampiroboroboana ny fifaninanana dia azonao atao ny manao raffle ...
Lalao - Jenga (Hasbro ...
Jenga dia kilalao voalohany izay avy amin'ny taonjato maro lasa izay, avy any amin'ny kaontinanta afrikanina. Tena tsotra, ary afaka milalao ny rehetra. Tsy maintsy esorinao fotsiny ireo sakana hazo amin'ny tilikambo tsy hianjera. Ny hevitra dia ny hamela ny tilikambo tsy voalanjalanja araka izay azo atao ka rehefa anjaran'ny mpanohitra dia mirodana. Izay mandatsaka ny sombintsombiny dia very.
Leo amin'ny lalao iray fotsiny? Mivezivezy matetika ve ianao ary tsy afaka mandray ny lalao rehetra anananao? Ny safidy tsara indrindra dia ny mividy an'ity fonosana kilalao mitambatra 400 ity. Ahitana boky misy toromarika ho an'ny rehetra. Anisan'ireo lalao an-jatony ireo ny sasany toy ny echec, lalao karatra, daomy, daomy, checkers, Parcheesi, sns.
Hividy lalao mitambatra
Raha mpankafy ianao andian-dahatsoratra amin'ny fahitalavitra, lalao video, na sarimihetsika amin'ireo sarimihetsika mahomby indrindra, misy lalao lohahevitra momba azy ireo izay ho tianao:
Lalao Dragon Ball
Ireo mpankafy ny sarimiaina Dragon Ball dia ho variana amin'ity lalao karatra ity izay ahitana ireo mpilalao amin'ny andiany malaza DBZ. Atsipazo fotsiny amin'ny anjaranao ny karatrao ary andramo handresy ny an'ny mpifanandrina, araka ny herin'ny tsirairay ...
Vidio ny Deck DBZ
Lalao Doom The Board aterineto
Lalao Fantasy Flight Doom ...
Doom dia iray amin'ireo lalao video malaza indrindra teo amin'ny tantara. Ankehitriny dia tonga amin'ny birao miaraka amin'ity lalao board ity izay ahafahan'ny mpilalao tsirairay ho an-dranomasina mitam-piadiana hanandrana hiady amin'ireo biby goavam-be indrindra azonao alaina sary an-tsaina.
Lalao Game of Thrones aterineto
Game of Thrones - Ny...
Raha voasarika tamin'ny andiany malaza HBO ianao, dia ho tianao koa ity lalao board misy loha-hevitra momba ny Game of Thrones ity. Ny mpilalao tsirairay dia mifehy ny iray amin'ireo Trano Lehibe, ary tsy maintsy mampiasa ny hafetsen'izy ireo sy ny fahafahany hifehy ny trano hafa. Ary ny rehetra miaraka amin'ny endri-tsoratra tena manan-danja indrindra amin'ny andiany.
Vidio ny Game of Thrones
Miaina eto ny tanàna sy ny olona avy amin'ny andian-tantara an-tsary malaza, ao amin'ity tabilao mahafinaritra ity izay hidiranao ao anatin'ny fiainan'ireo mavo mahafatifaty ireo.
Vidio ny The Simpsons
Ny Walking Dead Trivia
Fikarohana Trivial Ny...
Fikarohana Trivial mahazatra sy mahazatra, miaraka amin'ny fromazy, ny tailany, ny solaitrabeny, ny karatra misy fanontaniana ... Saingy misy fahasamihafana, ary izany dia aingam-panahy avy amin'ny andian-dahatsoratra malaza amin'ny zombies.
Vidio ny Trivial TWD
Ny Indiana Jones Tower
Hasbro Ny Tilikambon'ny ...
Lohateny fitsangatsanganana sy fahaiza-manao, napetraka ao amin'ny sarimihetsika Indiana Jones, miaraka amin'ny Tempolin'i Akator ho toerana. Fomba iray hahatsiarovana ity sarimihetsika ity izay anisan'ny nahazoany vola be indrindra tamin'ny androny.
Vidio ny La Torre
Noris - Alemà ny lalao ...
Lalao iray, toy izany koa i Jumanji. Ny sarimihetsika malaza momba ny lalao board dia tonga amin'ny endrika Escape Room ho an'ny fianakaviana iray manontolo. Fantaro ireo mistery ary afaho velona amin'ity ala mikitroka ity, raha azonao atao ...
Vidio ny Jumanji
Mitovitovy amin'izany ihany, ny Party & Co. mahazatra, miaraka amin'ny fitsapana mimic maro, fanontaniana sy valiny, sary, ankamantatra, sns. Fa ny rehetra miaraka amin'ny lohahevitry ny malaza indrindra Disney tantara foronina.
Mividiana Party Disney
Diset - Masterchef, Lalao ...
Misy lalao ihany koa ny fandaharana fandrahoan-tsakafo TVE. Milalao miaraka amin'ny fianakaviana manontolo ity tabilao napetraka ao amin'ny Masterchef ity ary miaraka amin'ny quizzes mifototra amin'ny fandaharana mba hahatratrarana ny tanjona.
Raha tianao ny tantaran'ny Jurassic Park ary mpankafy dinôzôra ianao dia ho tianao ity lalao birao ofisialy ity amin'ny sarimihetsika Jurassic World. Ny mpilalao tsirairay dia tsy maintsy mandray anjara, mikaroka sy mahita fôsily, miasa ao amin'ny laboratoara miaraka amin'ny ADN dinosaur, manangana tranom-borona ho an'ny dinôzôra ary mitantana ny valan-javaboary.
Vidio ny Jurassic World
Ny trano taratasy
Ny andian-tantara Espaniola La casa de papel dia nandroaka ny Netflix, ary nametraka ny tenany ho iray amin'ireo be mpijery indrindra any amin'ny firenena maro manerana izao tontolo izao. Raha anisan'ny mpanara-dia azy ianao dia tsy ho very ao amin'ny repertoire-nao ity lalao board ity. Birao misy taila izay ahafahanao milalao amin'ny maha-fianakaviana misy mpangalatra sy takalon'aina.
Space Cowboys hafa ...
Tonga amin'ny lalao board ny Universe Marvel sy ny Avengers. Amin'ity lalao ity dia tsy maintsy manangona ekipa mahery fo ianao ary manandrana manakana an'i Thanos tsy handrava ny planeta. Mba hanaovana izany, dia tsy maintsy ho hita ny Infinity Gems izay miparitaka manerana izao rehetra izao.
Vidio ny Splendor
Eleven Force Cluedo Ny...
Mbola Cluedo mahazatra izy io, miaraka amin'ny dinamika sy fomba filalaovana mitovy. Saingy miaraka amin'ny lohahevitry ny andian-tantara malaza The Big Bang Theory.
Vidio ny The Big Bang Theory
Ilay maneno. Abba ...
Manana lalao ofisialy ihany koa ankehitriny ny andian-tantara espaniola La que se avecina. Milalao ao amin'ny tranobe malaza Montepinar sy ny toetrany. Mety amin'ny 8 taona izy io, ary afaka milalao hatramin'ny olona 12. Ao amin'ny lalao dia atolotra ho an'ny fiarahamonina ny zavatra, ary ny mpilalao tsirairay dia manapa-kevitra ny hifidy na tsia.
Vidio ny LQSA
Harry Potter tsy misy dikany
Fanenjehana Trivial - Harry ...
Ny tantaran'i Harry Potter dia nanome aingam-panahy sarimihetsika, andian-tantara, lalao video, ary lalao board. Raha tianao ny bokiny dia afaka manana fanontaniana an'arivony momba ny toetrany sy ny tantaran'ny ody malaza indrindra tamin'ny taonjato faha-XNUMX amin'ity Trivia ity ianao.
Vidio ny Trivial HP
Tompon'ny peratra tsy misy dikany
HERY IRAIKA IRAISAM-PIRENENA Trivial Feno ...
Ny Hobbit sy The Lord of the Rings dia anisan'ireo boky nahomby indrindra nafindra tany amin'ny sinema. Ankehitriny izy ireo dia nanome aingam-panahy vieogames ary mazava ho azy, lalao board toa an'ity Trivial ity. Ny lalao trivia mahazatra dia miakanjo amin'ity lohahevitra fanatika medieval ity.
Vidio ny Trivia Lord of the Rings
Legiona Star Wars
Tonga eo amin'ny latabatrao izao ny hery sy ny maizina miaraka amin'ity lalao mifototra amin'ny tantara foronina siantifika malaza ity. Lalao ho an'ny mpilalao 2, manomboka amin'ny 14 taona, ary ahafahanao miaina ny ady malaza eo amin'ny Jedi sy ny Sith. Tariho ny miaramilanao miaraka amin'ireto sarivongana kely misy sary sokitra ireto.
Vidio ny Star Wars Legion
Avy amin'ny boky no nandehanany nankany amin'ny lalao video sy ny sarimihetsika. Vao haingana no niverina tany amin'ny teatra i Dune niaraka tamin'ny dikan-teny vaovao. Eny, azonao atao ihany koa ny milalao ity lalao board paikady mahafinaritra ity. Miaraka amin'ireo lafiny lehibe mifanatrika, miaraka amin'ny tany efitra malaza sy planeta karakaina, ary izay rehetra antenainao amin'ny Dune.
Lalao kilalao paikady
rehetra ireo izay manana fanahy stratejika sy tia lalao ady, Capture the Flag (CTF), sy ny toy izany, hankafizin'izy ireo amin'ny maha-ankizy azy ireo lalao paikady manaraka ireto:
ERA Moyen Âge
ERA Moyen Âge -...
Ny ERA dia mitondra anao any Espaina amin'ny Moyen Âge, lalao paikady misy 130 miniatures, 36 dice, 4 boards, 25 pegs, 5 marker, ary 1 bilaogy hahazoana isa. Fomba iray hamerenana ny tantara espaniola miaraka amin'ity lohateny lehibe ity.
Vidio ny ERA
Io no lalao paikady par excellence, iray amin'ireo be mpividy indrindra sy nahazo loka, misy mpilalao 2 tapitrisa manerantany. Miorina amin'ny nosy Catan izy io, izay nahatongavan'ireo mpifindra monina mba hamorona tanàna voalohany. Ny mpilalao tsirairay dia hanana ny azy, ary tsy maintsy mamolavola ireo tanàna ireo mba hanovana azy ireo ho tanàna. Mba hanaovana izany dia mila loharanon-karena ianao, manangana fifanarahana ara-barotra ary miaro tena.
Vidio ny Catan
Ity dia iray amin'ireo lalao board stratejika tsara indrindra. Izy io dia mifototra amin'ny vanim-potoanan'ny Ady Twilight, nandeha tany amin'ny tontolo niaviany ny Hazakazaka Lehiben'ny Fanjakana Lazax fahiny, ary ankehitriny dia misy vanim-potoanan'ny fahatoniana marefo. Hihetsika indray ny vahindanitra manontolo amin'ny ady hamerenana ny seza fiandrianana. Izay mahazo hery ara-miaramila manan-tsaina kokoa sy fitantanana no ho tsara vintana.
Vidio ny Twilight Imperium
Kilalaon'ny lalao ady sy paikady. Birao iray izay hanafika sy hiaro tena amin'ny hafetsena, hisambotra ny sainan'ny fahavalo miaraka amin'ny tafikao 40 miaraka amin'ny laharana samihafa.
Ity lalao ity dia anisan'ny malaza indrindra amin'ity karazana ity. Miaraka amin'izany dia tsy maintsy mamolavola paikady hifehezana an'izao tontolo izao ianao. Miaraka amin'ny tarehimarika 300 nohavaozina, iraka misy karatra ary famolavolana tena mitandrina. Ny mpilalao dia tsy maintsy mamorona tafika, manetsika tafika manerana ny sarintany ary miady. Miankina amin'ny valin'ny daoty no handresy na ho resy ny mpilalao.
Ahoana raha miara-mivondrona amina lalao iray hamolavola drafitra Machiavellian ireo olon-dratsy Disney rehetra? Fidio ny toetranao tianao indrindra ary fantaro ny fahaiza-manao miavaka ananany. Mamorona paikady tsara indrindra amin'ny fihodinana tsirairay ary miezaha handresy.
Lalao Lookout 22160028 -...
Avy amin'i Uwe Rosenberg, ity fonosana ity dia misy boards 9 misy lafiny roa, vato 138, hajia ara-tsakafo 36, vato biby 54, vato 25 olona, ​​fefy 75, tranon'omby 20, mari-pamantarana kabine 24, tranon'ny firenena 33, taila vahiny 3, fampitomboana 9 taila, bloc scoring 1, vato fiaingana mpilalao 1, karatra 360, ary boky fampianarana. Tsy ampy amin'ny antsipiriany ny fahafahanao manangana sy mitantana ny toeram-pambolenao medieval izay ahafahanao mampivelatra ny fambolena sy ny fiompiana hiadiana amin'ny hanoanana ...
Lalao Damn The Great ...
Azo antoka fa mahazatra anao ilay lohateny hoe Ady Lehibe, na Ady Lehibe, nataon'i Richar Borg. Izy io dia mpamorona mitovy amin'ny Memoir 44 sy Battlelore. Izy io dia mifototra amin'ny ady tamin'ny Ady Lehibe I, ahafahan'ny mpilalao miandany sy mamerina ny ady ara-tantara izay nipoitra tao anaty hady sy sahan'ady. Lalao tena malefaka miaraka amin'ny karatra ho an'ny hetsika sy dice izay mamaha ny ady.
Andro mahagaga 7301 ...
Avy amin'io mpanoratra io ihany, ity iray hafa ity dia iray amin'ireo lalao paikady ady tsara indrindra azonao vidiana. Apetraho amin'ny Ady Lehibe Faharoa ity fotoana ity, miaraka amin'ny fanitarana sy toe-javatra samihafa hanitarana ny atiny. Raha tianao ny tetikady sy tantara ara-miaramila, dia mety aminao toy ny fonon-tanana izany. Na dia somary sarotra aza izany ...
Imhotep: Ilay Mpanorina an'i Ejipta
Devir - Imhotep, ny ...
Miverena any Ejipta fahiny. I Imhotep no mpanorina voalohany sy malaza indrindra tamin'izany fotoana izany. Amin'ity lalao board ity dia azonao atao ny manandrana mampifanaraka ny zava-bitan'izy ireo amin'ny fananganana tsangambato ary manamboatra ny drafitrao manokana mba hisorohana ny mpanohitra tsy hahomby.
Miady mba ho Mpanorina ny fanjakana manaraka. Mampiaiky ny andriana amin'ny fahaizanao amin'ny fampandrosoana ny tanàna ary ampio ireo mpilalao isan-karazany amin'ity lalao paikady ity. Manana karatra 8 ianao ao anaty fonosana azo isafidianana, karatra distrika 68, karatra fanampiana 7, famantarana satroboninahitra 1 ary marika volamena 30.
An-tserasera ary maimaim-poana
Manana lalao board an-tserasera maro koa ianao, mba milalao maimaimpoana irery na miaraka amin'ny olon-kafa lavitra, ary koa ny fampiharana ho an'ny fitaovana finday mba hialana voly tsy mila mifandray mivantana (na dia izany aza dia manala ny sasany amin'ny hatsarany, ary amin'ny vidin'ny hazavana ... manana ny lalao ara-batana):
Tranonkala lalao maimaim-poana
Apps ho an'ny fitaovana finday
Afaka mikaroka ao amin'ny fivarotana ianao Google Play amin'ny findainao na amin'ny Apple App Store, miankina amin'ny rafitra miasa anananao, ireto lohateny manaraka ireto:
Catan Classic ho an'ny iOS sy Android.
Carcassone ho an'ny Android
Monopoly ho an'ny iOS sy Android
Scrabble ho an'ny iOS sy Android
Pictionary ho an'ny iOS sy Android
Chess ho an'ny iOS sy Android
Ny lalao Goose ho an'ny iOS sy Android
Misy sokajy roa ihany koa ny lalao board izay, na dia azo ampidirina amin'ny iray amin'ireo sokajy teo aloha aza, dia mamorona sokajy mahaleo tena manokana. Ankoatr'izay, ireo dia nahavita a fahombiazana feno habibiana, ary mihamaro hatrany ny mpankafy an'ireto fomba ireto:
Lalao Escape Room an-tserasera
Lasa lamaody ny Escape Rooms ary nanafika ny faritany Espaniola rehetra. Izy ireo dia efa iray amin'ireo fialam-boly ankafizina indrindra any amin'ny firenena maro, satria mamela anao hiara-hiasa amin'ny namana na fianakaviana ary hamaha piozila. Ankoatra izany, manana lohahevitra isan-karazany izy ireo, mba hanomezana fahafaham-po ny tsirony rehetra (science fiction, horohoro, tantara, ...). Fametrahana tsy mampino fa noho ny Covid-19 dia misy fameperana lehibe. Mba hialana amin'ireo fetra ireo dia tokony hojerenao ny anaram-boninahitra Escape Room tsara indrindra hilalao ao an-trano.
Jereo ny lalao board tsara indrindra Escape Room
Lalao milalao anjara
Ny iray amin'ireo trangan-javatra faobe izay mahazo mpanaraka dia ny anjara asa. Tena mampiankin-doha izy ireo, ary misy karazany maro ihany koa, miaraka amin'ny lohahevitra maro. Ireo lalao ireo dia mandentika anao amin'ny andraikitra, toetra iray izay tsy maintsy ataonao mandritra ny lalao mba hahatratrarana ny tanjona.
Jereo ny lalao solaitra tsara indrindra
Ahoana ny fisafidianana ny lalao board tsara indrindra
Amin'ny fotoana misafidy ny lalao board mety ny fanalahidy sasany dia tsy maintsy raisina. Ireto hevitra ireto dia hanampy anao hanao ny fividianana tsara foana:
Isan'ny mpilalao: zava-dehibe ny mandinika ny isan'ny mpilalao handray anjara. Tsy misy afa-tsy ho an'ny olona 2, ny hafa ho an'ny olona maromaro, ary na dia miaraka amin'ny vondrona na ekipa aza. Raha ho an'ny mpivady na ho an'ny roa izy ireo dia tsy dia ilaina loatra, satria saika ny rehetra dia azo lalaovina amin'ny olona roa ihany. Etsy an-danin'izany, raha natao ho an'ny fivorian'ny namana na lalao board fianakaviana izy ireo, dia lasa zava-dehibe izany.
taona: zava-dehibe ny manamarina ny taona atolotra ny lalao. Betsaka ny lalao natao ho an'ny rehetra manomboka amin'ny ankizy ka hatramin'ny zokiolona, ​​ka tonga lafatra ny lalaovin'ny fianakaviana. Fa kosa, ny sasany amin'ny votoatiny dia manokana ho an'ny zaza tsy ampy taona na olon-dehibe.
fomba: Ny lalao sasany dia natao hanatsara ny fitadidiana, ny hafa hanatsara ny lojika, ho an'ny fahaizana ara-tsosialy, hampiroborobo ny asa fiaraha-miasa, na ho an'ny fahaiza-manao maotera, ary ny fanabeazana mihitsy aza. Raha tsy misy izy ireo dia ho an'ny zaza tsy ampy taona, dia zava-dehibe ihany koa izany, satria ny mety indrindra dia tsy maintsy mifidy araka ny filan'ny zaza.
Lohahevitra na sokajy: Araka ny hitanao dia misy karazany maromaro ny lalao board. Tsy ny olon-drehetra no tia ny olon-drehetra, noho izany dia zava-dehibe ny mahafantatra ny fomba hamantarana ny fomba filalaovana isaky ny sokajy mba hahomby amin'ny fividianana.
Complexity sy ny fianarana curve: tena zava-dehibe raha tanora na antitra no handeha hilalao, fa ny fahasarotan'ny lalao dia tsy avo, ary manana curve fianarana mora. Amin'izany fomba izany dia ho azon'izy ireo haingana ny fihetsehan'ny lalao ary tsy ho very na ho kivy izy ireo amin'ny tsy fahaizany milalao.
Milalao toerana- Lalao birao maro no ahafahanao milalao amin'ny latabatra na ety ivelany. Amin'ny lafiny iray, ny hafa dia mila toerana kely kokoa ao amin'ny efitrano fandraisam-bahiny na efitrano lalao. Noho izany dia ilaina ny mandinika tsara ny fetran'ny trano ary jereo raha afaka mampifanaraka tsara amin'ny tontolo iainana ny lalao voafidy.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Omeo fialamboly aho » General » Ny lalao board tsara indrindra hatramin'izay